Taliban oo shuruudo ku xirtay ka qeybgalka shirka Istanbul
Shuduudaha Taalibaan waxaan ka mid ah; in muddada uu shirku soconayo aysan ka badnaan saddex maalmood, in ajandaha shirka aysan ku jirin go'aan ka gaarista arrimaha xaasaasiga ah iyo in wafdiga Taalibaan aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaas.
"Hoggaamiyaheenna ayaa soo jeediyay in kulanka Istabul aanu ka badnaan saddex maalmood" ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan Taalibaan oo aan dooneyn in magaciisa la shaaciyo.
Hoggaamiye kale oo sare oo ka tirsan Taalibaan ayaa isna xaqiijiyay warkan markii ay VOA la soo xiriirtay.
“Haddii dadaalkan nabadeed uusan guuleysan, Isla markaana aanu jirin heshiis u dhexeeya Pakistan iyo Afgaanistaan, waxaan dhib soo gaari doonaa Pakistan, waayo iyada ayaa la eedeyn doonaa, maxaa yeelay in badan oo ka mid ah hoggaanka Taliban ayaa ku nool dalkeeda, ”ayuu yiri Khalilzad.
Pakistan ayaa dhinaceeda sheegtay inay kooxda Taaliban ku qalqaalin doonto shirkan, si ay u hirgalaan wadahadallada nabadda ee Afghanistan.